चिनिया कम्पनीबाट सरकारले खोस्यो बुढिगण्डकी आयोजना, अब कसले पाउँछ ?::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
चिनिया कम्पनीबाट सरकारले खोस्यो बुढिगण्डकी आयोजना, अब कसले पाउँछ ?
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरबको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चिनिया निर्माण कम्पनी गेजुवाबाट खोसेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठककाले बुढिगण्डकी आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदीय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको जनाएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनिया कम्पनी गेजुवालाई बुढिगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजनालाई चीनले नेपालको आग्रहमा ‘वन बेल्ट वन रोड’ मा समेत राखेको छ ।
हचुवाको भरमा आयोजना निर्माण जिम्मा लगाउने र चीन सरकारलाई नै चिढ्याउने गरी आयोजना चिनिया कम्पनीबाट खोस्नुले सरकारको अदुरदर्शी कामलाई प्रष्ट पारेको छ । आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।